VONDRONA EOROPEANINA : Namatsy vola hanaraha-maso ny fifidianana
Ho an’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo dia anisany olana goavana ny fahambanian’ny tahan’ny olom-pirenena tonga nifidy. Afaka iray volana mahery eo dia ho tonga indray ny fifidianana Kaominaly. 10 octobre 2019
Mila atao matanjaka ny fanentanana ny olom-pirenena mba hanefa izay adidiny ho an’ny firenena. Ho an’ny fiarahamonim-pirenena Safidy izay efa nandray anjara hatrany tamin’ny fanaraha-maso ny zotram-pifidianana dia raisin’izy ireo ho andraikitra lehibe hatrany ny fanentanana ny mpifidy handatsa-bato mba hisian’ny fifidianana tena demokratika. Nanamafy ny Safidy fa ilaina ny fiaraha-miasa amin’ny rantsana samihafa mba hanehoana izay fahavononana hampangarahara ny fifidianana izay.
Manoloana izany indrindra dia nisy ny famatsiam-bola mitentina 208 000 Euros ho an’ny fiarahamonim-pirenena Safidy avy amin’ny Vondrona Eoropeanina. Famatsiam-bola hoentina hampandehanana ny asa rehetra izay hiantsorohan’izy ireo mandritra ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolo-tsaina Kaominaly. Marihana fa Distrika miisa 112 manerana ny nosy no ahitana ireo solotena avy amin’ity fiaraha-monim-pirenena ity mifanome tanana amin’izay fanaraha-maso mandritra ny zotram-pifidianana izay. Ny vondrona Eoropeanina dia efa nanome tantsoroka hatrany an’i Madagasikara amin’ny sehatra maro.
"Salama sy matanjaka tsara ny tenako ary tsy mitsoaka ady " NAMALY NY TSAHO ANENJEHANA AZY RAJOELINA (204) 2 juillet 2020 "Mbola betsaka ny kolikoly tsikaritra eny amin’ny sakana ara-pahasalamana" VOIFIRAISANA (88) 2 juillet 2020 Distrika maro no efa misitraka fampandrosoana FAMPANANTENANA NATAON’NY FILOHA (76) 2 juillet 2020 Mbola tsy raharahian’ny vahoaka ny Covid-19 FAHASALAMANA AO MAHAJANGA (75) 2 juillet 2020 Sekoly tsy miankina iray eny Ambatolampy Antehiroka tsy manara-dalàna FEPETRA COVID-19 (70) 30 juin 2020 Olona roa hafa indray maty, 88 indray ny tranga teto Antananarivo VALANARETINA “CORONAVIRUS” (66) 2 juillet 2020